Ezona 10 zokutya zilikhoboka Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Abanye bayamangaliswa kukutya kunokuba likhoboka. Ngokwezifundo ezivela kwiDyunivesithi yaseColorado State, eUnited States, okunye ukutya (ubukhulu becala ukutya okunamafutha amaninzi neswekile) kunokuba likhoboka leziyobisi.
Ukutya okuphekwe kakhulu ngumzekelo ogqibeleleyo woku. Phakathi kwezinye izinto, esi sesinye sezizathu zokuba abantu abaninzi bahlupheke ngenxa yeebhayingi ezinyanzelekileyo.
1 Ukutya oku-10 okulikhoboka kakhulu
2 Ukutya oku-10 okuncinci
Ipasta ice cream
Ukuchonga oku kutya kunye nokuhlalutya iipropathi zazo zesondlo kubaluleke kakhulu. Oku kufunyanisiweyo kunceda ukuqhubela phambili unyango lwezifo ezinje ngokutyeba, njengoko kucacile ukuba ayisiyonto nje yokuzikhethela.
Ukusikwa "kokutya okuthile ekudleni ke ngoko akukho lula kunokuba kubonakala ngathi, emva kwayo yonke loo nto, kukho imeko yokulutha kubudlelwane phakathi kwabantu kunye nokutya kwabo.
Ke ngoko, kubalulekile ukuba ukutya okukhankanyiweyo ayisosiseko sokutya, kodwa okwahlukileyo kuko, ukuze ubungendawo bunokuphetshwa.
Ukutya oku-10 okuncinci
Iimbotyi (ngaphandle kwesosi)
Iipopcorn (akukho bhotolo okanye ityuwa)
Oku kutya kufuneka kube sisiseko sokutya okusempilweni kunye nokutya okusempilweni, kuba zonke ziluncedo kakhulu empilweni kwaye azibangeli likhoboka. Ukusetyenziswa kwayo kuyacetyiswa ngakumbi kwabo namhlanje banengxaki yokunyanzelwa kwaye bafuna ukutshintsha le meko.
Ukunciphisa izahlulo kunye nokuyeka ukutya xa "isisu sigcwele," kucetyiswa ngakumbi ukuba utye ibroccoli kunye nesalmon.